Maxaa ka jira in dowladda federaalku ay ciidamo ka qoranayso G/Mudug? – Hornafrik Media Network
Maxaa ka jira in dowladda federaalku ay ciidamo ka qoranayso G/Mudug?
Guddoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland Axmed Muuse Nuur oo la hadlay warbaahinta Puntland, ayaa si adag u beeniyay in dowladda Federaalka Soomaaliya ay ciidamo ka qoratay deegaanno ka tirsan gobolka Mudug.
“Waxaasi wax jira maaha ciidana lagama qoran gobolka Mudug, colaad Federaal iyo Federaal ku soo duulayna ma jiro” ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur.
Wuxuu intaasi raaciyay in aysan jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeya maamulka gobolka Mudug ee Puntland iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya, isagoo caddeeyay in wixii heer federaal ee looga baahdo gobolka Mudug ay tahay in loo soo maro xukuumadda Puntland.
“Annaga heer gobol xiriir lama lihin dowladda federaalka ah, xiriir waxaan la leenahay dowladda aan ka tirsanahay, xiriirka federaalkana waxaa leh xukuumadda sare ee ilaa heer madaxweyne ah” ayuu hadalkiisa sii raaciyay guddoomiye Axmed.
Dhinaca kale, dowladda federaalka ayuu ku eedeeyay in aysan aaminsaneyn nidaamka federaalka ee lagu doortay, taasi beddelkeedana ay door-bidayso in dalka loo maamulo nidaam tuulo-tuulo iyo degmo-degmo ah sida uu hadalka u dhigay guddoomiye Axmed Muuse.
Dad badan oo guryahooda ka qaxaya dalka Bangladesh.
Dil maanta ka dhacay G/Hiiraan iyo xiisad colaadeed oo ka dhalatay